ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေအတိုင်းအဆမရှိ လှုပ်ခါသွားလောက်အောင် အရမ်းကိုမိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ရတနာဗိုလ်ရဲ့ ရှယ်ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေအတိုင်းအဆမရှိ လှုပ်ခါသွားလောက်အောင် အရမ်းကိုမိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ရတနာဗိုလ်ရဲ့ ရှယ်ဗီဒီယိုလေး
By Shwe BaPosted on March 7, 2021 March 7, 2021
အနု ပညာ လော က မှာ ပရိ သတ် အခိုင် အမာ နဲ့ အောင်မြင်မှု တွေ စွာ ရပ်တည် နေ ပြီး ဇာတ် ကား တွေများ သွာ ရိုက်ကူး သရုပ်ဆောင် ထား တဲ့ ပြည်သူ ချစ် အနုပညာ ရှင် မင်းသမီး ချော လေး က တော့ ရတနာဗိုလ် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် နော် … သရုပ် ဆောင် ကောင်း တဲ့ အပြင် ချစ် စရာ ကောင်း ပြီး ကျော့ ရှင်း တဲ့ အလှ တရား တွေ နဲ့ ဆွဲ ဆောင် မှု ရှိ တဲ့ ဟန်ပန် လေး တွေ က လည်း မြင်သူ ပရိ သတ် တွေ ကို အချစ်ပို စေ တာဖြစ် ပြီး ယောကျ်ား လေး မိန်း က လေး မရွေး အားလုံး က ချစ်ခင် နေ ကြ တာပါ ။
ဖောင်းဒိုင်း သိုင်းကွက်များကြည့်ရန် 👇 👇👇
ပရိ သတ် အချစ် တော် လေး သူမ က တော့ အနု ပညာ လှုပ်ရှား မှု လေးတွေ ကို အမြဲမျှ ဝေ လေ့ ရှိပြီး အပြင် လက် တွေ့ ပုံရိပ် လေး တွေနဲ့ လည်း အလွမ်း ပြေ စေ ကာ အခု တစ် ခါမှာ လည်း ရေကူး အပန်း ဖြေ နေတဲ့ အမိုက် စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ဝေ မျှ လာပါ တယ် နော်..။ဖြူဖွေးဝင်းဥ နေ တဲ့ရင်ခုန် စရာ အတွင်းသား အလှ တွေပေါ်လွင် နေ တဲ့ ရေကူးဝတ်စုံ လေး ကိုဝတ်ဆင် ကာ ထိရက် စ ရာ မရှိ အောင် ညို့အား ပြင်းပြင်း မိမိုက် လွန်း နေ တဲ့ ရတနာဗိုလ်ရဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေ ကတော့ ပရိ သတ်တွေ ရဲ့ အမြင်အာရုံတွေကို ဖမ်းစား ထားပါ တယ် နော်..။
“ နှစ်သစ် မှာ အချစ် တွေ မလျော့ပါ နဲ့ ပိုချစ် ပေးပါ နော်…….. . . ” ဆိုပြီး ရေ ကူး အပန်းဖြေ နေတဲ့ သူမ ရဲ့ အမိုက် စား ပုံရိပ် လေး တွေ ကို ရတနာ ဗိုလ် က ပရိသတ် တွေ ကို နှစ်သစ် အစ လေး မှာ အလွမ်း ပြေ လေး ဝေမျှ လိုက် တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် နော်..။ညို့ အားပြင်း တဲ့ အလှတွေ ပေါ် လွင် နေပြီး အမိုက်စား လေး ဖမ်းစား ထား တဲ့ မင်းသမီး ချောလေး သူမ ရဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေ ကို လည်း ပရိသတ် တွေ သဘော ကျ နေကြမှာမို့ အားလုံး အ တွက် တင်ဆက် ပေးလိုက် ပါ တယ် နော် … .
သိုင်းလောကသားတွေ "ကောင်းဘွိုင်မြင်းစီး" ပုံစံရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိထားသင့်တယ်နော် 👇 👇👇
photo credit : Yadanar Bo ’ s fb acc
အႏု ပညာ ေလာ က မွာ ပရိ သတ္ အခိုင္ အမာ နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြ စြာ ရပ္တည္ ေန ၿပီး ဇာတ္ ကား ေတြမ်ား သြာ ရိုက္ကူး သ႐ုပ္ေဆာင္ ထား တဲ့ ျပည္သူ ခ်စ္ အႏုပညာ ရွင္ မင္းသမီး ေခ်ာ ေလး က ေတာ့ ရတနာဗိုလ္ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္ … သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေကာင္း တဲ့ အျပင္ ခ်စ္ စရာ ေကာင္း ၿပီး ေက်ာ့ ရွင္း တဲ့ အလွ တရား ေတြ နဲ႔ ဆြဲ ေဆာင္ မႈ ရွိ တဲ့ ဟန္ပန္ ေလး ေတြ က လည္း ျမင္သူ ပရိ သတ္ ေတြ ကို အခ်စ္ပို ေစ တာျဖစ္ ၿပီး ေယာက်္ား ေလး မိန္း က ေလး မေရြး အားလုံး က ခ်စ္ခင္ ေန ၾက တာပါ ။
ပရိ သတ္ အခ်စ္ ေတာ္ ေလး သူမ က ေတာ့ အႏု ပညာ လႈပ္ရွား မႈ ေလးေတြ ကို အျမဲမၽွ ေဝ ေလ့ ရွိၿပီး အျပင္ လက္ ေတြ႕ ပုံရိပ္ ေလး ေတြနဲ႔ လည္း အလြမ္း ေၿပ ေစ ကာ အခု တစ္ ခါမွာ လည္း ေရကူး အပန္း ေၿဖ ေနတဲ့ အမိုက္ စား ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို ေဝ မၽွ လာပါ တယ္ ေနာ္..။ျဖဴေဖြးဝင္းဥ ေန တဲ့ရင္ခုန္ စရာ အတြင္းသား အလွ ေတြေပၚလြင္ ေန တဲ့ ေရကူးဝတ္စုံ ေလး ကိုဝတ္ဆင္ ကာ ထိရက္ စ ရာ မရွိ ေအာင္ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း မိမိုက္ လြန္း ေန တဲ့ ရတနာဗိုလ္ရဲ့ ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကေတာ့ ပရိ သတ္ေတြ ရဲ့ အျမင္အာ႐ုံေတြကို ဖမ္းစား ထားပါ တယ္ ေနာ္..။
“ ႏွစ္သစ္ မွာ အခ်စ္ ေတြ မေလ်ာ့ပါ နဲ႔ ပိုခ်စ္ ေပးပါ ေနာ္…….. . . ” ဆိုၿပီး ေရ ကူး အပန္းေၿဖ ေနတဲ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္ စား ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို ရတနာ ဗိုလ္ က ပရိသတ္ ေတြ ကို ႏွစ္သစ္ အစ ေလး မွာ အလြမ္း ေၿပ ေလး ေဝမၽွ လိုက္ တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္..။ညိဳ႕ အားျပင္း တဲ့ အလွေတြ ေပၚ လြင္ ေနၿပီး အမိုက္စား ေလး ဖမ္းစား ထား တဲ့ မင္းသမီး ေခ်ာေလး သူမ ရဲ့ ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကို လည္း ပရိသတ္ ေတြ သေဘာ က် ေနၾကမွာမို႔ အားလုံး အ တြက္ တင္ဆက္ ေပးလိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
သိုင်းလောကသားများအတွက် တကယ်သိသင့် ဖတ်သင့်တဲ့ Post 👇 👇👇
Previous post အသဲယားစရာတွေ ထပ်လုပ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး
Next post လှပလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို တွန့်လိမ်ပြီး အမိုက်စားကကွက်လေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
© 2020. Shwe Ba. Power by Jit Too